(L) Striatum မှရှောင်ရှားနိုင်သောချဉ်းကပ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များကိုထိန်းချုပ်သည် (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ် Porn
(L) Striatum (2015) ရှောင်ရှားခြင်း-ချဉ်းကပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များထိန်းချုပ်
မေလ 28, 2015
ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့သည်အခြားသူများထက် ပို၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေသည်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဆုံးဖြစ်စေသောအရာများတွင်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအရာများပါ ၀ င်သောရွေးချယ်စရာများပါ ၀ င်သည်။ မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဝေးဝေးနေသည့်မြို့တစ်မြို့တွင်လုပ်ခလစာ နည်း၍ လခနည်းသော ၀ င်ငွေကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ချဉ်းကပ်မှုမှရှောင်ရှားခြင်းပconflictိပက္ခဟုသိကြသည့်ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အခြေခံကျသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ circuit ကို MIT မှသုတေသီများကဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများသည်စိတ်ကျရောဂါရောဂါများကိုကုသရန်နည်းလမ်းသစ်များရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်စိတ်ကျရောဂါ၊
MIT မှ McGovern Institute for Brain Research မှသုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်နှင့်စာတမ်းတစ်စောင်၏အဓိကရေးသားသူက“ ဤရောဂါများကိုကုသရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်” ၏မေလ 28 ရက်ပြissueနာအတွက်တွေ့ရှိချက်များ ကလာပ်စည်း.
Friedman နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ဤရောဂါများအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကုထုံးများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းကိုပြသခဲ့သည်။ ဒီ circuit ကို rodents များဖြင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်များရှိနေသော်လည်းအနိမ့်ဆုံးငွေပေးချေမှုနည်းသောရွေးချယ်မှုများအတွက် ဦး စားပေးအသွင်ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစာတမ်း၏အကြီးတန်းစာရေးဆရာမှာအန်းဂရီးဘီးလ်ဖြစ်သည်။ MIT အင်စတီကျု့ပါမောက္ခဖြစ်ပြီး McGovern Institute ၏အသင်း ၀ င်ဖြစ်သည်။ အခြားစာရေးဆရာများမှာ postdoc Daigo Homma၊ သုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်များ Leif Gibb နှင့် Ken-ichi Amemori၊ ဘွဲ့ကြို Samuel Rubin နှင့် Adam Hood နှင့်နည်းပညာလက်ထောက် Michael Riad တို့ဖြစ်သည်။
Striosomes ၏အခန်းကဏ္outကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းမှုမှထွက်ပေါ်လာသည့်လေ့လာမှုအသစ်သည် Striatum မှတဆင့်ဖြန့်ဝေထားသောဆဲလ်အစုအဝေးများ၊ လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်အချို့သောလူ့မသန်စွမ်းမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း Graybiel သည် striosomes များကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်းသူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ ဦး နှောက်အတွင်းအလွန်သေးငယ်သောကြောင့်၎င်းသည်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ဖြင့်ပုံဖော်ရန်ခက်ခဲသည်။
Graybiel ၏ဓာတ်ခွဲခန်းမှယခင်လေ့လာမှုများက ဦး နှောက်၏ prefrontal cortex ၏နေရာများကို striosomes သို့ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤဒေသများသည်စိတ်ခံစားမှုများကိုပြုပြင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်ခဲ့သဖြင့်သုတေသီများကဤ circuit သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လည်းဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုသံသယရှိကြသည်။
ဤအတွေးအခေါ်ကိုစမ်းသပ်ရန်သုတေသီများသည်ချဉ်းကပ်မှု - ရှောင်ရှားခြင်းမြင်ကွင်းအပါအ ၀ င်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ၅ မျိုးကိုလုပ်ဆောင်သောကြောင့်ကြွက်များကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်ဝင်္ကပါပြေးနေသောကြွက်များသည်ကြိုက်နှစ်သက်သောချောကလက်ပါဝင်သည့်ရွေးစရာတစ်ခုနှင့်သူတို့မနှစ်သက်သောတောက်ပသောအလင်းနှင့်မှိန်သောအလင်းဖြစ်သော်လည်းအားနည်းသောချောကလက်တို့ပါ ၀ င်သည်။
ဤသို့သောကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလူသားများအားအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောအခါသူတို့သည်များသောအားဖြင့်သူတို့၏ရွေးချယ်မှုအပေါ်သြဇာသက်ရောက်သည့်စိုးရိမ်စိတ်ကိုခံစားရလေ့ရှိသည်။ "ဒီအလုပ်အမျိုးအစားဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုင်ရာရောဂါတွေနဲ့အလွန်သက်ဆိုင်ပါတယ်" အကယ်၍ ဒီ circuit ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလေ့လာနိုင်လျှင်၎င်းရောဂါရှိသူများကိုကူညီနိူင်သည်။
သုတေသီများကကြွက်များအားကြွက်များအားအခြားရွေးချယ်စရာ ၄ ခုတွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ဤလုပ်ငန်းငါးခုတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုအခြားဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်ထူးခြားသည်ဟူသောကောက်ချက်ချရန်ဖြစ်သည်။
cortical cells အပေါ်အလင်းထွန်းလင်းခြင်းဖြင့်သူတို့ကို striosomes သို့ cortical input ကို turn off လုပ်ခွင့်ပြုသည့် optogenetics ကို အသုံးပြု၍ သုတေသီများက cortex ကို striosomes နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသော circuit သည်ချဉ်းကပ်မှုမှရှောင်ရှားခြင်းအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရာတွင်အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏အခြားအမျိုးအစားများမှာအားလုံးအဘယ်သူအားမျှ။
သုတေသီများသည် cortex မှ striosomes များကိုထည့်သွင်းခြင်းကိုပိတ်လိုက်သောအခါကြွက်များသည်ယခင်ကသူတို့ရွေးထားသည့် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအကျိုးအမြတ်မြင့်မားသောရွေးချယ်မှုကိုစတင်ရွေးချယ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အကယ်၍ သုတေသီများသည် striosomes ကိုထည့်သွင်းရန်လှုံ့ဆော်လျှင်ကြွက်များသည်တန်ဖိုးနည်းပြီးမြင့်မားသောဆုလာဘ်ရွေးချယ်မှုကိုမကြာခဏရွေးချယ်ကြသည်။
နယူးယောက်တက္ကသိုလ်မှဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံပါမောက္ခ Paul Glimcher ကဤလေ့လာမှုကို“ လက်ရာ” အဖြစ်ဖော်ပြပြီးနှစ်ရှည်လများလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကိုဖြေရှင်းရန်နည်းပညာအသစ် optogenetics အသုံးပြုခြင်းကြောင့်အထူးစွဲမှတ်သွားသည်။ လေ့လာမှုသည်အခြားဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်ပုံစံများတွင် striosome လုပ်ဆောင်မှုကိုလေ့လာရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်ဟုသူကထပ်ပြောသည်။
"ဒီ [Graybiel] ရေးသားခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ ကြာတဲ့ပဟေ--ိကိုခွဲခြားထားတယ်။ Striosomes တွေကဘာတွေလုပ်နေလဲ" သုတေသနအဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သူ Glimcher ကပြောကြားသည်။ “ ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာဒီစာတမ်းဟာအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့အများကြီးပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုရလိမ့်မယ်။ သူမကကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေအများကြီးကဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပြီးတခြားဒေသတွေမှာဖြေရှင်းသွားမှာပါ။ ”
တွေ့ရှိချက်များအရ striatum နှင့်အထူးသဖြင့် striosomes များသည်တံခါးစောင့်တစ်ယောက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး cortex မှလာသည့်အာရုံခံခြင်းနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုပ်ယူပြီးမည်သို့တုံ့ပြန်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသုတေသီများကဆိုသည်။
ထိုတံခါးစောင့် circuit တွင် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းပါဝင်သည်ဟုထင်ရပြီးလှုံ့ဆျောမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည့် dopamine ပါ ၀ င်သောဆဲလ်များဖြစ်သော sustia nigra ဟုခေါ်သည်။ သုတေသီများက Striosomes မှထုတ်လွှတ်လိုက်သောအခါဤ sustia nigra ဆဲလ်များသည်တိရိစ္ဆာန်သို့မဟုတ်လူနာ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်သဘောထားအပေါ်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုသုတေသီများကယုံကြည်ကြသည်။
Grebiel က“ ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကိုသုံးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုစိတ်ခံစားချက်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိခိုက်စေတဲ့တခြားရောဂါတွေကိုသက်သာအောင်နည်းလမ်းရှာချင်ပါတယ်။ "ဒီအလုပ်မျိုးကအဲဒါကိုအမှန်တကယ် ဦး စားပေးတယ်။ "
စိုးရိမ်ဖွယ်ရာရောဂါများအတွက်ကုသမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အပြင်သုတေသီများသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည့်ဆက်စပ်ရောဂါများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်ဤတိုက်နယ်ရှိ dopamine ပါဝင်သော sustia nigra ဆဲလ်များ၏အခန်းကဏ္betterကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါသုတေသနကိုစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျု၊ CHDI ဖောင်ဒေးရှင်း၊ ကာကွယ်ရေးအဆင့်မြင့်သုတေသနစီမံကိန်းများအေဂျင်စီ၊ အမေရိကန်စစ်တပ်သုတေသနရုံး၊ Bachmann-Strauss Dystonia နှင့် Parkinson ဖောင်ဒေးရှင်းမှနှင့် William N. နှင့် Bernice E. Bumpus ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
အထက်ပါပုံပြင်အပေါ်အခြေခံသည် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ကပံ့ပိုး နည်းပညာတက္ကသိုလ်မက်ဆာချူးဆက်။ မူရင်းဆောင်းပါးကို Anne Trafton ရေးသားခဲ့သည်။ မှတ်ချက်: ပစ္စည်းများအကြောင်းအရာနှင့်အရှည်များအတွက် edited နိုင်ပါသည်။
Alexander Friedman၊ Daigo Homma၊ Leif G. Gibb, Ken-Ichi Amemori, Samuel J. Rubin, Adam S. Hood, Michael H. Riad, Ann M. Graybiel ။ Striosomes များကိုပစ်မှတ်ထားသည့် Corticostriatal Path ပunderိပက္ခအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်. ကလာပ်စည်း၂၀၁၅ ခုနှစ် DOI 10.1016 / j.cell.2015.04.049
ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် - စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်သော Optogenetics ဦး နှောက်ကွန်ယက်ကိုဖော်ထုတ်ပါ
အားဖြင့်မေလ 28, 2015 12:13 pm တွင် Susan Scutti
ချဉ်းကပ်မှုမှရှောင်ရှားနိုင်သောပconflictsိပက္ခများအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ခက်ခဲပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင်ကူညီရန် striosomes ပါ ၀ င်သောအထူးကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်သည်။ ဓာတ်ပုံယဉ်ကျေး Shutterstock.
မင်းမှာပိုက်ဆံပိုလိုတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းကလခကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလိုချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါဟာကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာနဲ့ညနက်ပိုင်းနဲ့စနေ၊ ရည်မှန်းချက်သည်နှစ်လိုဖွယ်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပြီးနှစ်လိုဖွယ်မရှိသောအခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပconflictိပက္ခကိုကြုံတွေ့ရသည် ချဉ်းကပ် - ရှောင်ရှားခြင်း။ ဤပconflictsိပက္ခများအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ခက်ခဲပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်ကူညီသည့်အထူးကွန်ယက်တစ်ခုကိုဆက်သွယ်သည် MIT အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်။ ဤအာရုံကြော circuit သည် striosomes နှင့်စတင်ပြီးအဆုံးသတ်သည်။
striosomes အတိအကျဘာတွေလဲ? ဤရွေ့ကားဆဲလ်အစုသည် striatum မှတဆင့်ဖြန့်ဝေသည် - ဦး နှောက် cortex အောက်ရှိကြီးမားသော ဦး နှောက်regionရိယာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ Striosomes များသည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့် ဦး နှောက်အတွင်း၌အလွန်နက်ရှိုင်းစွာရှိနေသော်လည်းသုတေသီများကသူတို့ကို fMRI ဖြင့်ပုံဖော်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သူတို့သည် ဦး နှောက်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမရှိသေးသောနယ်မြေဖြစ်သည်။
ဦး နှောက်သုတေသနအတွက် McGovern Institute မှအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် MIT ပါမောက္ခဒေါက်တာ Ann Graybiel ၏ဓာတ်ခွဲခန်းမှယခင်လေ့လာမှုများက ဦး နှောက်၏ prefrontal cortex ၏ဒေသများကို Striosomes သို့ဖော်ထုတ်သည်။ ဤဒေသများသည်စိတ်ခံစားမှုများကိုကူညီပေးသောကြောင့်သုတေသီများက ဦး နှောက်ပတ်လမ်းတစ်ခုလုံးသည်စိတ်ခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်ဟုသံသယရှိကြသည်။ အရေးကြီးသည်မှာမျောက်များတွင်ချဉ်းကပ်မှုမှရှောင်ရှားခြင်းပconflictsိပက္ခများအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်များသည် striosomes များကိုပစ်မှတ်ထားသောလူ့ဇုန်နှင့်ကိုက်ညီသည့် medial prefrontal ဒေသရှိအာရုံခံဆဲလ်အချို့ကို ရွေးချယ်၍ သက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်။
ဤတိုက်နယ်နှင့်ယင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပိုမိုနားလည်လိုသောကြောင့် MIT အဖွဲ့သည်စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သုတေသီများသည်ကြွက်များကိုလေ့လာပြီးကွဲပြားသောအပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ၅ မျိုးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကြွက်များ၏ရွေးချယ်မှုများသည်အခြေအနေလေးခုတွင်အတော်လေးရိုးရှင်းသော်ငြားတစ် ဦး တွင်သုတေသီများသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောချဉ်းကပ်မှု - ရှောင်ရှားခြင်းမြင်ကွင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ဒီဝင်္ကပြေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကြွက်များခဲ့ရသည် ရှေးခယျြ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုအကြား - ခိုင်မာသည့်ချောကလက် (သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်) နှင့်တောက်ပသောအလင်း (သူတို့မကြိုက်သည့်) နှင့်မှိန်သောအလင်းရှိသော်လည်းအခြားအားနည်းသောချောကလက်ပါဝင်သည်။
ငါတို့လူသားတွေအလားတူရင်ဆိုင်ရဖို့ဖြစ်လျှင် ချဉ်းကပ် - ရှောင်ရှားခြင်း ရွေးချယ်မှုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏“ ကုန်ကျစရိတ် - အကျိုးအမြတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း” ကိုလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။
ကြွက်များ၏တုန့်ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်သုတေသီများကဖော်ပြသည့်လုပ်ငန်းငါးခုအတွက်နောက်ထပ်ရှုထောင့်တစ်ခုကိုထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဝင်္ကပါလမ်းကြောင်းအချို့တွင်သိပ္ပံပညာရှင်များသည် cortical ဆဲလ်များသို့အလင်းကိုတိုက်ရိုက်ထွန်းလင်းပေးခြင်းဖြင့်ကြွက်များ၏ striosomes များကို cortical input ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည် optogenetics.
ကြွက်များကိုအလင်းပေးခြင်းအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်စဉ်များသုတေသီများသည် cortex ကို striosomes နှင့်ဆက်သွယ်သော circuit သည်ချဉ်းကပ်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ကြောင်းသုတေသီများကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသော်လည်းအခြားလုပ်ငန်းလေးခုတွင် striosomes များသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်လုံး ၀ သြဇာမသက်ရောက်ခဲ့ပါ။
ဤတွေ့ရှိချက်များက striatum (အထူးသဖြင့် striosomes) သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတံခါးစောင့်အဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟုသုတေသီများကဆိုသည်။ Striosomes များသည် cortex မှလာသည့်အာရုံခံမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုပ်ယူပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရန်ယင်းကိုပေါင်းစပ်သည်။
ဤတူညီသော circuit တွင် dopamine ပါဝင်သောဆဲလ်များရှိသည့် midbrain ဒေသရှိ sustantia nigra ပါဝင်သည်။ Striosomes များကလှုံ့ဆော်သောအခါသုတေသီများကဤ sustia nigra ဆဲလ်များသည်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသဘောထားများ.
နောက်ဆုံးတွင်ဤသုတေသနက aချစ်ခြင်းမေတ္တာ နှင့်အခြားခံစားချက်သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်။ dopamine ပါ ၀ င်သော sustia nigra ဆဲလ်များ၏အခန်းကဏ္betterကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအားဖြင့် MIT မှဂိုဏ်းသည်သူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုမည်သို့သက်သာစေနိုင်သည်ကိုယုံကြည်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ နှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများ။
ရင်းမြစ် - Friedman A၊ Homma D၊ Gibb LG ။ Striosomes များကိုပစ်မှတ်ထားသည့် Corticostriatal Path ပunderိပက္ခအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ ကလာပ်စည်း။ 2015 ။